Warbixinta DFS ee Shirka Brussels ee 16ka September iyo Qorshaha "New Deal"
Hoos ka akhri warsaxaafadeedyada ka soo baxay DFS ee shirka Brussels lagu qabanayo 16ka September 2013.
Muqdisho 26 June 2013 – Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud oo maanta xafiiskiisa ku qaabilay Agaasimaha Guud ee Afrika ee Midowga Yurub Mr Nick Westcott iyo Safiirka Midowga Yurub Michelle Cervone kalana hadlay shirka Brussels lagu qaban doono 16ka September 2013 iyo sidii loo xoojin lahaa xiriirka Midowga Yurub iyo Soomaaliya.
Ra'iisal Wasaaraha oo sheegay in Soomaaliya aad ugu hanweyn tahay shirka Brussels iyo heshiiska caalamka
Muqdisho, Juun 26, 2013. .. Ra'iisal Wasaaraha Xukuumada Federaaliga ah ee Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon "Saacid" oo maanta si rasmi ah u furay kulankii guddi hoosaadka Heshiiska Caalamka ee loo yaqaano New Deal ayaa muujiyay sida weyn ee loogu hanweyn yahay shirka Brussels ee qorshahan lagu fariisin doono.
"Waxaan aad ugu qanacsanahay inaan isfaham buuxa la yeelano caalamka intiisa doonaysa inay gacan naga siiyaan dib-u dhiska iyo horumarka dalkeena. Waa mid aan hormuud ka nahay noona ogolaanaya inaan baahideena gudbisano, sida aan rabnana naloogu taageero," ayuu yiri Ra'iisal Wasaaraha oo khudbo kooban ka jeediyay kulankii maanta ay yeesheen hawl-wadeenada isku jira ee qorshaha New Deal.
Nick Westcott oo ah Agasinka Midowga Yurub ee Arrimaha Bariga Africa oo shirka ka hadlay ayaa sheegay in wali laga shaqaynayo heshiiskii Soomaaliya iyo bulshada caalmka ee doonaysa innay Soomaaliya taakulayso. Waana hawl socon doonta inta laga gaarayo Sebteembar 16 oo ah marka uu shirku furmayo, ayuu yiri Nick. Waxaana uu intaas ku daray in qorshahani yahay mid Soomaalida lagu garab-qabanayo una suurto galinaya inay ka guul-gaaraan qorshohooda qaran.
Dhanka kale, waxaa isna arrrinta ka hadlay wakiilka Qaramada Midoobay ee Soomaaliya Nicholas Kay oo qorshahan ku tilmaamay mid xoojinaya xiriirka u dhexeeya Soomaaliya iyo bulshada caalamka. Waxaana uu dawladda Soomaaaliya ugu baaaqaay innay la timaado baarnaamij dib-u dhis iyo horumar oo dhamays tiran.
Ra'iisall Wasaaraha ayaa sheegay innay xukuummaddiissu aqbashay qorshaha New Deal ayna dooonayso siday u heli lahayd qaabka ugu sahlan ee caalamku gaacan uga siin kaaro qorsha dawligaa. Waxaana uu sheegay innay shacbiga iyo dawladduba aad ugu han-weyn yihiin heshiiska labada dhican ee lagu wado innuu ka soo baxo shirka Brussells ee dhacaya Sebteembar 16.
Sawirada Halkan ka daalaco
Madaxweynaha oo hanbalyada 26ka Juun u diray shacabka Soomaaliyeed
Muqdisho 26 Juun 2013 - Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamud ayaa hambalyo u direy shacabka Soomaaliyeed ee ku aadan munaasabadda 26ka Juun.
Madaxweynaha oo ka qeybgalay xaflad si heer sare ah loo soo agaasmay oo ka dhacday Madaxtooyada oo ay ka soo qeybgaleen Guddoomiyaha Baarlamaanka, Ra'iisul Wasaaraha, Guddoomiyaha Maxkamadda Sare, Ra'iisul Wasaare Ku-xigeennada, Wasiiradda, Xildhibaanada, Guddoomiyaha Gobolka Banadir iyo marti sharaf kale ayuu madaxweynahu ugu hambalyeeyey shacabka Soomaaliyeed munaasibadda maalintii xornimada ay qaateen gobolada Waqooyi oo aheyd 26kii Juun 1960.
Madaxweynahu waxuu yiri "53 sano ka hor ayey aheyd markii dhalinyaro Soomaaliyeed horseed ka noqdeen halgankii lagu helay xornimada, midnimada, qaranimada isla markaana kor u qaaday sharafkii iyo karaamadii shaqsiga Soomaaliga ah. 53 sano dadku wey ka waxbarasho yaraayeen maanta, weyna ka dhaqaale yaraayeen, hase yeeshee waxaa jirtay geesinimo, waddan jaceyl iyo midnimo xoogan."
Madaxweynaha ayaa sidoo kale sheegey in "Maanta ay muuqato ifafaallo rajo weyn na siineysa inaan marxaladdan adag si wadajir ah uga baxno. Wallaalaheen Waqooyiga waxey 53 sano ka hor la yimaadeen aragti dheer oo ay midnimada ummadda Soomaaliyeed uga dhigeen mid muqadas ah oo aan la taaban Karin, waana uga mahadcelineynaa dadaalkaas iyo aragtidaas fog."
Madaxweynahu waxuu sheegey in tafaraaruqa, qabyaaladda iyo danaha gaarka ah uusan xalku ku jirin oo loo baahanyahay Qaranimo, midnimo, wallaaltinimo iyo dowlad jaceyl na gaarsiin karta marxalad shaqsiga Soomaaliga ah uu sharaftiisa iyo karaamadiisa kor u qaadeysa.
Madaxweynaha ayaa xafladda ka dib salaam sharaf ka qaatay ciidamada isla markaana calankii lagu saaray goobtaas oo si qiiro waddaninimo leh ay ka wada muuqatay dhammaan ka soo qeybgalayaashii xafladii calan saarka iyo munaasabadii 26ka Juun.